Ny milina kafe mora indrindra amin'ny 2022 - Torolàlana momba ny fividianana sy tolotra
mpanamboatra kafe mora
milina kafe tsara indrindra
Karazana mpanamboatra kafe
Capsule milina kafe
Masinina kafe super automatique
milina kafe italiana
mpanao kafe mitete
mpanao kafe elektrika
mpanao kafe plunger
Cona mpanao kafe
Mpanamboatra kafe anatiny
milina kafe indostrialy
marika mpanamboatra kafe
kafe sy kojakoja
Kafe amin'ny tany
fitaovana kafe barista
thermos ho an'ny kafe
Soso-kevitra sy trik
manadio mpanao kafe
Manomana cappuccino tsara
Kafe mangatsiaka na gilasy
Ampiasao tsara ny mpanamboatra kafe italiana
Manaova kafe tsy misy mpanamboatra kafe
inona no kafe hovidiana
Accessories sy ny maro hafa
Raha tianao ny kafe (sy ny infusions hafa) ary eritreretinao mifidy mpanao kafe mety tsara izay mahafeno ny filanao dia ho fantatrao fa matetika dia tsy mora izany noho ny karazana karazana misy eny an-tsena. Ary raha efa sarotra ny misafidy karazana kafe, dia mbola sarotra ny mivezivezy eo amin'ny isan'ireo marika sy modely misy.
Ho an'ireo mpampiasa tsy manapa-kevitra, ato amin'ity tranokala ity dia hiezaka ny hampianatra anao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao ianao mba hahafahanao manapa-kevitra hoe karazana kafe ilainao araka ny safidinao, ary koa, inona no marika sy modely atolotra amin'ny tranga tsirairay. izay azonao ny vokatra tsara indrindra azo atao isaky ny tranga. Ankoatra izany, izany dia hisakana anao tsy handany vola be loatra, hahazoana antoka fa mandoa vidiny ara-drariny ho an'ny vokatra tsara ianao.
Ny milina kafe tsara indrindra eny an-tsena
Raha tsy te hanasarotra loatra ny tenanao ianao na efa manana hevitra, angamba mila mahafantatra fotsiny ianao hoe iza no milina kafe tsara indrindra hisafidianana ny anao. Raha fintinina ary tsy misy fanavakavahana amin'ny karazana dia ity ny tampon'ny milina kafe ankafizinay:
SIRA MAMY TOP
FIVORIANA ambony indrindra
Karazana milina kafe: inona no idealy?
Tsy misy karazana kafe iray ihany, raha tsy izany dia ho mora kokoa ny safidy. Misy vaovao milina elektrika izay nivoatra mba hanolotra vokatra tsara indrindra sy fampiononana lehibe indrindra, tsy mamindra tanteraka ny kafe nentim-paharazana vilany. Noho izany antony izany, amin'izao fotoana izao dia misy milina kafe mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny purist, ary koa ny maoderina indrindra.
Fantaro tsara izy ireo karazana milina kafe efa misy Tena ilaina ny mahafantatra ny fomba hifidianana ny mpanao kafe tsara indrindra araka izay tena tadiavinao. Teny vitsivitsy no ambaranay aminao eto:
ny mpanao kafe elektrika dia ireo rehetra nanolo ny loharano hafanana ivelany amin'ny rafitra fanamainana elektrika mba hanomanana kafe na infusions. Ity karazana mpanamboatra kafe ity dia haingana sy azo ampiharina kokoa ho an'ny ankamaroan'ny trano. Ankoatra izany, tsy mila fanadiovana na fikojakojana mandreraka toy ny mahazatra izy ireo. Ao anatin'ity vondrona ity ianao dia afaka mahita:
Capsule milina kafe: ireo no tena manjaka amin'izao fotoana izao, satria mora ampiasaina sy haingana. Safidio fotsiny ny kapsily ny kafe na ny fampidirana izay tianao hanomanana (ny sasany mamela anao hanomana zava-pisotro mafana sy mangatsiaka), ampidiro ao anaty milina, ary ao anatin'ny segondra vitsy dia ho vonona ny vera na kaopy. Ny rafitra fanerena azy dia handalo ny rano mafana amin'ny kapsule mba hanesorana ny tsirony sy ny fofon'ny atiny ary handroaka azy ao anaty vera/kaopy.
Masinina kafe super automatique: ireo milina ireo dia mamela anao hisafidy voan-kafe na kafe voatoto (manome fahalalahana bebe kokoa amin'ny tsy miankina amin'ny karazana kapsula tohanana), saingy tsy mitaky fiheverana be toy ny teo aloha izy ireo. Matetika izy ireo dia mijanona amin'ny fotoana mety, tsy mila manakana azy ireo ianao noho ny rafitra iray mahafantatra ny tokony hatao. Ankoatr'izay, matetika izy ireo dia manana fiasa fanampiny hafa mifandraika amin'ny teo aloha.
milina espresso manual: tsy mitovy amin'ny super automatique fa tsy misy grinder ka tsy maintsy atao tanana ny dingan'ny prime sy fanerena ny kafe. Ny sasany dia manana kojakoja naorina ho etona, izany hoe, mamela anao hanao ho azy ireo ronono foam sy hanome ny kafe izay manokana textures matihanina.
Mpanamboatra kafe anatiny: mazàna milina kafe tena mandeha ho azy izy ireo, fa ao an-dakozia ihany no ao an-dakozia toy ny fitaovana hafa, toy ny azo atao amin'ny milina fanasan-damba, fanasana vilia, lafaoro, microwave, sns.
Mitete na mpanamboatra kafe amerikana: Ireo dia milina kafe elektrika mahazatra izay mampiasa sivana fanary sy loharanon'ny hafanana elektrika. Afaka mampiasa izay kafe voatoto tianao ianao. Ny milina dia handalo ny rano mafana amin'ny kafe voatoto ary hanivana izany mba hitete ny vokatra ao anaty siny iray. Amin'ity tranga ity dia tsy monodose izy ireo. Ny sasany dia misy siny thermos, mba hitazonana ny kafe mafana mandritra ny ora vitsivitsy.
Italiana mpanamboatra kafe elektrika: mitovy amin'ny endriny sy ny fomba fiasa amin'ny milina kafe italiana na vilany Moka manual, fa avy amin'ny loharano elektrika. Ataovy ao an-tsaina fa maro ny milina kafe italiana no tsy manohana ny fandrahoan-tsakafo, noho izany dia misy ny dikan-jirony.
kafe nentim-paharazana vilany
Izy ireo dia ireo izay mbola miankina amin'ny loharano hafanana ivelany. Izy ireo dia noforonina taona maro lasa izay ary mbola misy hatramin'izao. Maro amin'ireo tia kafe no aleony manohy manomana ny kafe amin'ity karazana milina kafe ity, mifehy ny antsipiriany rehetra hatrany am-piandohana ary manao "fombafomba" manontolo mandra-pahazoany ny kafe tonga lafatra. Midika izany fa tsy haingana izy ireo ary mitaky dingana amin'ny tanana, ka tsy ho an'ny rehetra. Amin'izy ireo dia afaka manavaka ny:
milina kafe italiana: izy ireo dia milina kafe tena tsotra izay misy fitoeran-drano ao amin'ny faritra ambany. Io petra-bola io no apetraka eo ambony lovia mba hanafana azy sy hampangotrahana ny rano. Noho izany dia miakatra ny lakandrano ary mandalo amin'ny sivana izay ahitana ny kafe voatoto. Mamoaka ny fofony izy ary miakatra efa voasivana ao anaty fitoeran-drano any amin'ny faritra ambony.
mpanao kafe plunger: Ao amin'ny mpanao kafe plunger dia azo atao ny manao kafe sy ny fampidirana hafa. Tsy maintsy manafana ny rano amin'ny vay ao amin'ny microwave na ao anaty vilany ianao, ary avy eo dia ampidirina ao anatin'ny mpanamboatra kafe miaraka amin'izay tianao hampidirina. Akatonao ny sarom-bilany ary tosikao ny plunger mba handalo amin'ny sivanao ny rano misy tsirony ka hiala amin'ny tany ambany.
Cona na vacuum mpanamboatra kafe: Karazan-kafe tena miavaka izay noforonina taona maro lasa izay. Mitovitovy amin'ny fitsipika italiana ny fiasany. Ity mpanao kafe ity dia mampiasa loharano hafanana ivelany, toy ny afo na fandoroana mba handrahoana ny rano ao anaty fitoerany ambany, izay manitatra ny entona ary mampiakatra azy any amin'ny faritra ambony amin'ny alàlan'ny lakandrano mampifandray ny tapany roa. Eo no misy ny kafe harotsaka. Rehefa esorina amin'ny hafanana izy io, dia mifamatotra ny rivotra ao amin'ny faritra ambany ary miteraka vokatra banga, mitsoka ny kafe avy amin'ny faritra ambony amin'ny alàlan'ny sivana. Ny vokatra farany dia kafe efa vonona hosotroina any amin'ny farany ambany, mamela ny tany eo an-tampony.
Farany, ny milina kafe indostrialy Izy ireo dia sokajy manokana. Amin'ny ankapobeny, azo ampidirina amin'ny herinaratra izy ireo, satria miasa miaraka amin'ny rafitra fanamainana elektrika. Saingy lafo kokoa izy ireo, milina lehibe kokoa manana fahaiza-manao ambony. Izany dia ahafahanao manamboatra kafe haingana ary manao kafe maromaro miaraka amin'ny tranga sasany. Izy ireo dia mety amin'ny orinasa fandraisam-bahiny toy ny trano fisotroana kafe, trano fisotroana, trano fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny, sns, na dia betsaka aza ny mividy azy ireo ho ampiasaina ao an-trano.
mpanamboatra kafe lafo indrindra
Raha ny fanohizana ny voalaza hatramin’izay dia ireto ny sasany amin’ireo ny mpanao kafe tsara indrindra izay azonao vidiana amin'ity taona ity miaraka amin'ny sandan'ny vola tsara indrindra, mpitarika amin'ny sokajy misy azy avy araka ny karazana mpanamboatra kafe izay efa nohazavainay tamin'ny antsipiriany:
De'Longhi dia namorona iray amin'ireo milina kafe tsara indrindra ho an'ny Dolce Gusto capsules izay hitanao Miaraka amin'ny herin'ny 1500w sy rafitra fanafanana haingana ka tsy mila miandry na dia iray minitra aza ianao vao vonona ny kafe rehefa sitrakao. Miaraka amin'ny fanerena 15 bar dia azonao atao ny maka ny tsara indrindra amin'ny kafe na kapsily fampidirana mba hanomezana tsiro tsara indrindra.
Fanampin'izany, misy tobin-drano 0,8 litatra izy io, izay ahafahanao manamboatra kafe maromaro tsy mila mameno azy. Izy io dia miavaka amin'ny fiasa mahaliana, toy ny manomana zava-pisotro mafana na mangatsiaka, mora kokoa noho ny hatramin'izay ny fikojakojana noho ny anay mampitandrina rehefa tonga ny fotoana descale.
Ny mpanamboatra milina kafe italiana dia nikarakara ny famolavolana an'ity milina ity, miaraka amin'ny antsipiriany amin'ny vy tsy misy pentina ary endrika iray izay handravaka ny toerana hametrahanao ity fitaovana ity. Ao anatin'izany koa ny asa fijanonana mikoriana mba hampitsahatra ny jet ho azy, manitsy ny tenany mitete lovia ho an'ny karazana kaopy sy solomaso rehetra, mandeha ho azy fanakatonana rehefa afaka 5 minitra tsy mavitrika, sns.
Ny mpanamboatra malaza Krups dia namorona milina kafe tsara indrindra ho an'ny capsules nespresso izay hitanao eny an-tsena amin'ny vidiny mora. Fiononana faratampony ao anatin'ity milina matevina sy maivana ity, miaraka amin'ny tahony ergonomika sy loko manintona.
Misy bokotra hamelomana azy io, ary ao anatin'ny fotsiny 25 segondra Ho vonona sy miaraka amin'ny rano amin'ny hafanana mety mba hanomanana kafe tena tsara. Ny rehetra dia omena tankina 0.7 litatra, misy fanitsiana ny haben'ny kaopy miaraka amin'ny bokotra (Espresso sy Lungo), na fohy na lava.
Ny heriny sy ny tsindry 19 bara Izy ireo dia manome antoka fa azonao atao ny manala ny hanitra rehetra amin'ny voan-kafe voatoto avy amin'ny kapsily, ary koa ny fananana andrasana amin'ny kaopy kafe tsara. Fanerena izay tsy misy fitsiriritana kely amin'ny milina kafe matihanina.
Ankoatr'izay dia manana rafitra anti-drip, ary rafitra fanakatonana mandeha ho azy raha avelanao tsy mampiasa azy mihoatra ny 9 min.
Raha tianao ny Tassimo capsules, ny mpanamboatra Bosch dia manolotra iray amin'ireo milina kafe kapsula tsara indrindra ho an'ity orinasa azo ampiasaina ity. Hery 1400w, tanky 0.7 litatra, ary endrika mirindra sy manintona dia mameno ity milina ity mba hampidirana azy.
Miaraka amin'izany ianao dia afaka mankafy ny tsiron'ny safidy zava-pisotro mihoatra ny 40 mafana miaraka amin'ny tsirony tany am-boalohany. Tsy misy fika sarotra, safidio fotsiny ny kapsule tianao, tsindrio ny bokotra ary miandry ny kaopy na vera ho vonona (miaraka amin'ny fanohanana azo zahana amin'ny habe samihafa).
Ary mba hitazonana ny mpanao kafe madio ary tsy mifangaro ny tsirony, aorian'ny fampiasana tsirairay ny mpanamboatra kafe dia manana rafitra fanadiovana etona misy tsindry mba hamela azy ho vonona avy hatrany hanomana zava-pisotro hafa.
Ny iray amin'ireo marika Eoropeana lehibe dia Philips. Amin'ity indray mitoraka ity dia manana modely amin'ny mpanamboatra kafe izy senseo capsules izay ho tianao Misy amin'ny endrika manavao sy amin'ny loko maro hisafidianana izay mety indrindra araka ny tsironao.
Izy io dia mpanamboatra kafe tsy manam-paharoa, satria na dia amin'ny fatra tokana aza dia ahafahanao miomana kafe roa kaopy miaraka. Ny zava-drehetra haingana sy mora, mifantina ny hamafin'ny kafe lava, malefaka, fohy ary matanjaka izay tianao amin'ny fotoana rehetra ary miandry ny vokatra eo noho eo.
La Teknolojia kafe Boost miantoka ny hanesorana ny tsiro rehetra amin'ny capsule tsirairay miaraka amin'ny fanerena azy, miantoka ny tsirony tsara kokoa. Fanampin'izany, ny teknolojia Crema Plus dia miantoka fa ny sosona crema dia tsara kokoa ary manana endrika tsara kokoa noho ny amin'ny milina kafe elektrika hafa. Ary raha tsy mampiasa azy ianao dia hamono azy ho azy ao anatin'ny 30 minitra ny teknolojia mitsitsy angovo.
Oroley Iray amin'ireo marika tsara indrindra azonao vidiana amin'ity karazana ity mpanamboatra kafe italiana. Maro ny olona tia manomana kafe amin'ity karazana kafe mahazatra ity satria lazainy fa tiany kokoa ny tsirony. Izy ireo koa mateza sy mora.
ny vita amin'ny aluminium, ary mety amin'ny karazana lakozia rehetra, afa-tsy ny induction. Mahazaka 12 kaopy ny fitoeram-dranony, na dia misy habe samihafa aza mba hahafeno ny filana samihafa. Tafiditra ao koa ny valva fiarovana mba hisorohana ny loza.
Ny tena mahazatra hankafy kafe amin'ny fomba tranainy, mihaino ny gurgling sy mifoka ny fofony. Tsy ho very ao an-tranonao izany ary ankoatra ny fanomanana kafe matsiro, Ny milina kafe italiana dia manampy fikasihana miavaka izany dia tsy ho voamarika ary hanome toetra be dia be ny lakoziao.
Raha tianao ny iray mpanao kafe super automatique, iray amin'ireo tsara indrindra ho hitanao ny Italiana De'Longhi Ecam Magnifica, miaraka amin'ny fanerena 15 bar, hery 1450w, tanky rano 1.8 litatra azo esorina, tontonana LCD hijerena vaovao, rafitra cappuccino, dispenser kafe azo amboarina amin'ny habe samihafa, ary fanadiovana mandeha ho azy.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo milina kafe avo indrindra ity. Mahavariana ny habetsahan'ny asa entiny ary matsiro fotsiny ny fahataperan'ny kafe. kafe vao nototoina noho ny grinder mandeha ho azy amin'ny ambony sy ambony indrindra rehefa tonga ataovy manokana ny kafeo.
Ity mpanamboatra kafe an-trano ity dia manolotra momba ny valiny matihanina fa ho tianao raha tia kafe tsara ianao. Ankoatra izany, dia mamela anao hanomana kafe roa kaopy amin`ny fotoana iray ihany. Ary amin'ny tsy miankina amin'ny capsules dia ahafahanao misafidy ny kafe tianao indrindra.
Ny orinasa De'Longhi dia manolotra modely tena tsara hafa koa raha mitady zavatra tsara ianao mpanao kafe sandry ho an'ny trano. Miaraka amin'ity mpanamboatra kafe ity dia hahazo kafe matsiro ianao noho ny hery atolony 1350 W sy ny fanerena ambony noho ny paompy nentim-paharazana 15 sm tery.
Mampifandray ny rafitra Thermoblock mba hanafana ny rano amin'ny mari-pana mety ao anatin'ny 35 segondra monja. Izy io dia miasa miaraka amin'ny kafe rehetra ary miaraka amin'ny pods "Easy Serving Espresso", hanome anao fahalalahana bebe kokoa rehefa misafidy ny vokatra. Ankoatra izany, ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra dia ny anao sandry misy fihodinana 360º «capucinatore» mba hahazoana ny ronono foam sy cappuccino tsara indrindra toy ny hoe barista matihanina ianao.
Filoka azo antoka miaraka amin'ny iray amin'ireo sanda tsara indrindra amin'ny vola natao ho an'ireo olona rehetra mankafy ny fizotry ny fanomanana kafe.
Anisan'ny be mpividy indrindra milina kafe mandeha ho azy ny Oster Prima Latte, satria manana vidiny azo ovaina amin'izay tena atolony izy. afaka miomana cappuccino matsiro, latte, espresso, ary koa ny ronono etona mba hahazoana foam tsara.
Masinina espresso angano izy io, ankafizin'ny tranonkala maro sy mpankafy kafe noho ny tsirony dia manome azy amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny milina lafo vidy hafa.
Misy fitoeran-drano izy io Fahaiza 1.5 litatra, miaraka amin'ny siny ronono 300 ml fanampiny. Afaka mafana haingana izy noho ny heriny 1238 W.
Tompona a Pressure of 19 bara mba hanesorana ny ambony indrindra amin`ny kafe, manome be dia be ny creaminess ny vokany. Ary dia tena mora ny manadio, ary na dia mamela anao hanala ny ronono tanky mba hitahiry azy ao amin`ny vata fampangatsiahana.
Misy dikan-teny faharoa amin'ny milina, ny Oster Prima Latte II, miaraka amin'ny hery sy fahaiza-manao lehibe kokoa, ary na dia mbola tia ny tany am-boalohany aza ny purista, dia mbola filokana mahaliana ihany izany.
Ity iray ity Cecotec mpanamboatra kafe elektrika Io no iray amin'ireo mahaliana indrindra amin'ity karazana ity. Ny mpanamboatra robots an-trano malaza koa dia manao milina kafe miaraka amin'ny endrika kanto, compact, ary mahazo vokatra tena tsara raha oharina amin'ireo mpifaninana mivantana aminy.
Manana hery 1350w izy io mba hanafanana ny rano ho an'ny infusions, Thermoblock hanafaingana azy, 20 bara Ny fanerena mba hahazoana ny crème tsara indrindra sy ny hanitra faran'izay tsara indrindra toy ny milina kafe matihanina, dia misy etona mba hanoratana ny ronono sy hahazo ny foam tsara indrindra, mamela rano mafana mba handroaka mba hanomanana infusions, tanky 1.2 litatra, ary rafitra anti-drip.
Raha iray amin'ireo tianao ianao Amerikana na mpanamboatra kafe mitete, ny German Melitta dia iray amin'ireo tsara indrindra azonao vidiana. Izy io dia mpanamboatra kafe sivana elektrika, manana hery 1000w (kilasy A mahomby), 1.25 litatra, ary vita amin'ny vy tsy misy pentina.
Kafe lava na fohy matsiro sy manitra azo isafidianana, miaraka amin'ny thermos izay afaka mitazona ny kafe mafana mandritra ny 2 ora noho ny insulation isothermal amin'ny siny. Izy io koa dia misy sarony, mpihazona sivana anti-drip, mifanentana amin'ny sivana 1 × 4, tantana, fandaharana descaling, fanitsiana ny hamafin'ny rano, ary azo antoka ny fanasan-damba.
Cona habe D-Genius
Io no tena izy Cona mpanao kafe, na vacuum. Betsaka ny mitovitovy amin'izany eny an-tsena izay manandrana maka tahaka azy, saingy io ihany no mitazona ny endrika tany am-boalohany an'ity mpanamboatra kafe nentim-paharazana ity, ary koa ny maha-azo itokiana azy, satria mbola ny orinasa Cona no manamboatra azy.
Natao tany Eoropa, misy kaontenera roa fitaratra borosilicate mahatohitra ny fahatafintohinana mafana ary miaraka amin'ny rafitra tena izy izay hamongotra ny hanitra sy ny fananan'ny kafe rehetra noho ny fiantraikany amin'ny vacuum suction izay mampiavaka azy.
Ny fananana mpanamboatra kafe Cona dia orinasa matotra, marika iray manontolo amin'ny fomba sy ny maha-izy azy. Izany no mahatonga anay manoro hevitra anao handositra ny faka tahaka ary hitady ny Cona tany am-boalohany. Ny vidiny dia avo kokoa, fa ny hajia tsy azo lavina.
Raha tianao ny mampiasa ny mpanao kafe plunger, ny Bodum dia iray amin'ireo tsara indrindra sy mora indrindra azonao vidiana. Ity mpanamboatra kafe ity dia manana fitoeran-jiro borosilicate matanjaka, fahafahana hanomana kaopy 8 indray mandeha, ary plunger misy sivana mitambatra.
Afanaina ny rano mandra-pangotraka, arotsaka ao amin’ilay mpanao kafe ilay kafe efa voatoto na ilay “infusion” tianao amboarina, avela hilona ary tsindriana ny plunger. sivana ny fototra rehetra ary avelao izy ireo ho voafandrika ao ambadika. Amin'izany fomba izany dia hahazo ny fisotroanao avy hatrany ianao.
Ity karazana mpanamboatra kafe ity dia hampahatsiahy mihoatra ny iray amin'ireo raibe sy renibenao, ary izany no izy safidy mora, mora entina, mora entina ary izany koa dia miasa amin'ny fanaovana infusions isan-karazany.
Lelit dia iray amin'ireo mpanamboatra malaza indrindra amin'ny milina kafe mandeha ho azy ho an'ny indostria hotelier. Miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony mora diovina, milina fikosoham-bary kafe mitambatra, siny rano 3.5 litatra lehibe, hery 1200 W, ary rafitra fanerena ambony.
Misy valva 3-fomba hanamainana ny vovo-kafe, antokon-doha mba hanomanana kafe iray isaky ny mandeha, ary kettle varahina. Izy io dia mifanaraka amin'ny voan-kafe, kafe voatoto, ary koa kafe pods. Ankoatra izany, dia misy rafitra iray mba hamandoana sy hamokatra foam tsara.
Araka ny nasehon'ilay marika, mpanamboatra kafe "ho an'ireo tia kafe ihany": vita amin'ny vy tanteraka, mahavariana ny fiafarana ary ny asany dia eo amin'ny haavon'ny mpamboly kafe mitaky indrindra.
Ahoana ny fisafidianana mpanamboatra kafe: famintinana tsikelikely
Raha toa ianao fa sarotra ny zavatra, dia hiezaka ny hanatsotra ny dingana ny mifidy izay mpanamboatra kafe hovidiana. Ny zavatra voalohany tokony hotadidinao dia ny zavatra tadiavinao mba hahafantaranao izay ilainao. Zavatra toa miharihary, saingy tsy dia tsotra loatra izany amin'ny fampiharana. eritrereto izao fidio izay karazana trosa tianao hanomana ny vilany kafe ho avy:
Kafe ihany: tsy maintsy misafidy ianao eo amin'ny iray amin'ny Nespresso, Senseo, Italiana, azo ampifandraisina, sandry, super-automatique, mitete na Amerikana, Cona, ary kapsules indostrialy (raha ho an'ny orinasa). Ao anatin'izany dia azonao atao ny mampihena ny fahafaha-manao arakaraky ny tianao hampiononana bebe kokoa na latsaka:
Automático: Kapsily Nespresso, Senseo, azo ampidirina, sandry, mandeha ho azy.
Manual: mitete na Amerikana, Cona, na indostrialy.
Fanafody hafa (dite, chamomile, balsama voasarimakirana, valerian,...): Tsy maintsy misafidy ianao na Dolce-Gusto, Tassimo, na mpanao kafe plunger. Toy ny tamin'ny tranga teo aloha, dia azonao atao ny mampihena bebe kokoa ny fahafaha-manao:
Automático: avy amin'ny kapsule Dolce-Gusto na Tassimo.
Rehefa mazava tsara ny karazana milina na mpanamboatra kafe ilainao araka izay tianao hanomanana dia azonao jerena ity kisary manaraka ity mba hamaritana hoe iza no fahasamihafan'ny karazana kafe tsirairay, ary noho izany dia farano ny fisafidianana iray manokana:
ny capsules: haingana, tsotra ary azo ampiharina.
Nespresso: kafe tena mafonja ny vokany, misy vatana sy hanitra tena tsara, ary koa ny firafitry ny tena. Ny kapsily dia voafetra kokoa raha oharina amin'ny Dolce-Gusto na Tassimo, satria kafe tsy misy karazany samihafa ihany no hitanao, fa izay ihany.
Dolce GustoFampiarahana: kafe mahery, fofona tsara, foam tsara ary texture. Miaraka amin'ny kapsule kafe isan-karazany isan-karazany (espresso, spotted, notapatapahina, tsy misy kafeinina,...), ary koa ny dite ronono, dite mangatsiaka, ary zava-pisotro mafana sy mangatsiaka hafa.
Tassimo: Na dia tsy ambony noho ireo roa teo aloha aza ny kalitao dia manome vokatra mitovy ihany izy io. Ankoatra izany, ny capsules izay hitanao dia tena isan-karazany, toy ny Dolce-Gusto. Avy amin'ny kafe tena isan-karazany ka hatramin'ny infusions sy zava-pisotro malaza hafa. Miaraka amin'ny karazany 40 mahery, iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha mitady karazany mihoatra ny zavatra rehetra ianao.
Senseo: Mitranga toy ny amin'ny Nespresso izy io, somary voafetra kokoa amin'ny resaka karazany. Ny kafe amin'ity tranga ity ny kalitao dia mitovy amin'ny an'i Tassimo.
Superautomatic, sandry na azo ampifandraisina: mitovy vokatra ireo telo ireo. Kafe mitovy amin'ny azo amin'ny milina kafe indostrialy matihanina, ary miaraka amin'ny tombony amin'ny sandry vaporizer hamorona foam avo lenta izay tsy azonao atao amin'ny capsules, na amin'ny elektrika hafa na nentim-paharazana.
elektrika hafa: ho an'ny kafe amerikanina na drip, ankoatra ny tsy mora sy haingana toy ny teo aloha, ny vokatry ny kafe dia tena madio, mamela ny hanitra sy ny tsirony ho ankasitrahana. Na eo aza izany, ireo tia kafe tsara dia tsy mankasitraka azy ireo loatra. Raha ny tokony ho izy, dia mety ho tsara ho an'ireo izay mitady zavatra mora, miaraka amin'ny fahalalahana mampiasa kafe rehetra, ary manao kafe be dia be indray mandeha ary tsy manompo irery.
nentim-paharazana: tsy mahazo aina toy ny teo aloha ny dingana. Tsy maintsy manao ny dingana tsikelikely ianao mandra-pahazoanao ny vokatra.
Italiana: Izy ireo dia mamela anao hanomana kafe tsara amin'ny fofona tena miavaka. Mora ihany koa izy ireo ary tsy sarotra ampiasaina, na dia miadana kokoa aza ny dingana. Na izany aza, mamela anao hanao mihoatra ny iray kaopy isaky ny mandeha arakaraka ny habeny.
cone: raha Cona tena izy ireo dia tena tsara ny vokatra. Amin'ny fampidirana ny kafe amin'ny hafanana ambany kokoa noho ny hafa (eo amin'ny 70ºC), izany dia mahatonga ny kafe hihazona ny toetrany organoleptika tsara kokoa noho ny karazana hafa.
plunger: Afaka manolotra vokatra mitovy amin'ny teo aloha izy ireo. Ny tanjany lehibe indrindra dia izy ireo dia tena mora ary mety tsara ho an'ny zokiolona izay tsy mahay mampiasa ny maoderina na tsy te hanasarotra ny fiainany.
AN'NY TAOZAVA-BAVENTY: ho an'ny orinasa, manatratra tsiro sy haingon-trano matihanina noho ny endri-javatra atolony. Lafo kokoa sy lehibe kokoa izy ireo. Ireo karazana milina espresso ireo dia manual, na dia misy ihany koa ny super-automatique.
Inona no kafe hovidiana?
Miankina amin'ny karazana kafe ampiasainao, mila kafe iray na iray hafa ianao. Angamba na ny mpanamboatra kafe anao aza dia manohana karazana kafe maro. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manana ny mampiavaka azy sy ny fikafika. Fantatrao ve hoe firy ny karazana kapsily kafe misy? Inona no tsiambaratelo tokony hofidiana kafe tany tsara indrindra? ary raha mividy ianao voan-kafe, ahoana ny fikosehana azy tsara?
Fitaovana kafe: ny tena ilaina
Ny tontolon'ny kafe dia midadasika ary raha tianao ity zava-pisotro ity dia tsy hitsahatra ho gaga amin'ny isan'ny safidy azo ampiasaina ianao. mamadika ny traikefa kafe ho zavatra miavaka. Ho an'ny maro dia fombafomba mihitsy aza izany. Na izany aza, misy fitaovana maromaro izay toa tena ilaina: mpanandro ronono mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny creaminess, milina kafe ho an'ny texture tonga lafatra na thermoses mba hitahiry sy hitaterana ny kafeo manokana. Zahao hoe.
1 Ny milina kafe tsara indrindra eny an-tsena
2 Karazana milina kafe: inona no idealy?
2.1 mpanao kafe elektrika
2.2 kafe nentim-paharazana vilany
2.3 milina kafe indostrialy
3 mpanamboatra kafe lafo indrindra
3.11 Cona habe D-Genius
3.13 Sary PL41TEM
4 Ahoana ny fisafidianana mpanamboatra kafe: famintinana tsikelikely
5 Inona no kafe hovidiana?
6 Fitaovana kafe: ny tena ilaina
Masinina kafe Cona sy milina kafe vacuum
Bialetti milina kafe
Masinina kafe Bosch
Bra mpanao kafe
Masinina kafe Cecotec
Mpanamboatra kafe DeLonghi
Delta mpanamboatra kafe
Illy milina kafe
Jura mpanao kafe
Krups milina kafe
Lavazza milina kafe
Masinina kafe Melitta
MiniMoka mpanao kafe
Masinina kafe Nespresso mora
Orbegozo milina kafe
Oroley mpanamboatra kafe
Oster mpanao kafe
Philips milina kafe
Saeco milina kafe
Senseo milina kafe
Smeg milina kafe
Solac mpanamboatra kafe
milina kafe Tassimo
Ufesa milina kafe
Karazana kapsily kafe